ရုပ်အချောဆုံး ဘောလုံးသမား (၁ဝ) ယောက်စာရင်းမှာ ဘယ်သူတွေပါလဲ
ရုပ်အချောဆုံး ဘောလုံးသမား (၁ဝ) ယောက်
6 Aug 2018 . 11:21 AM
ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာ ဘောလုံးသမားပေါင်း (၂၆၅) သန်းနဲ့ ဒိုင်လူကြီး (၅) သန်းရှိတယ်လို့ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရပြီး ဘောလုံးအားကစားဟာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ (၄) ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ပါဝင်ပက်သက်နေတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားတွေ အများကြီးရှိတဲ့အထဲကမှ ရုပ်အချောဆုံး (၁ဝ) ယောက်ကို ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
(၁ဝ) Thibaut Courtois
ချဲလ်ဆီးကလပ်နဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံလက်ရွေးစင်အသင်းတို့ရဲ့ ဂိုးသမား Thibaut Courtois က ဒီစာရင်းမှာ နံပါတ် (၁ဝ) မှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။ (၆) ပေ (၇) လက်မဆိုတဲ့ အရပ်ကြီးက မြန်မာမိန်းကလေးတွေရဲ့ အမြင်အရ ပြောရရင် တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးပေါ့။ စပိန်နိုင်ငံသူ Marta Domínguez နဲ့ ၂ဝ၁၅ခုနှစ်မှာ လက်တွဲခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၇ခုနှစ် ဧပြီလမှာ လမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်။ သားသမီး (၂) ယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး လက်ရှိအချိန်မှာတော့ လူလွတ်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်နဲ့ စပိန်ကွင်းလယ်ကစားသမား Isco ကိုတော့ လူတိုင်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ (၂၆) နှစ်သာ ရှိသေးပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား (၄) ကြိမ်၊ ကမ္ဘာ့ကလပ် (၃) ကြိမ်နဲ့ လာလီဂါဖလား (၁) ကြိမ်အထိ အောင်မြင်မှုရရှိထားပါတယ်။ သူဟာ Victoria Calderón နဲ့ (၅) နှစ်ကြာ လက်တွဲခဲ့ပြီး သားတစ်ယောက်ရခဲ့ပါတယ်။ ၂ဝ၁၇ခုနှစ်မှာတော့ စပိန်မင်းသမီး Sara Sálamo နဲ့ တွဲနေကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ (၅) ပေ (၉) လက်မသာရှိပေမယ့် နှုတ်ခမ်းမွေး၊ မုတ်ဆိတ်မွေးတွေနဲ့ ကြည့်ကောင်းလွန်းလို့ လူချောစာရင်းဝင်ဖြစ်သွားတာပါ။
(၈) Cesc Fàbregas
အာဆင်နယ်နဲ့ ဘာစီလိုနာကလပ်တွေမှာ ကစားခဲ့တဲ့ Cesc Fàbregas ဟာ ချဲလ်ဆီးမှာ ကစားနေပါတယ်။ အရပ် (၅) ပေ (၁၁) လက်မရှိပြီး လူချောတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ Daniella Semaan နဲ့ သားသမီး (၃) ယောက်ရှိပြီး ၂ဝ၁၈ခုနှစ် မေလမှာ လက်ထပ်ထားပါတယ်။ သူကတော့ အိမ်ထောင်နဲ့ပါ။ အရပ်အမြင့် (၅) ပေ (၁၁) လက်မရှိပါတယ်။
(၇) Gerard Pique
Gerard Pique ဟာ ဘာစီလိုနာနဲ့ စပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့ ကစားနေတဲ့ ဗဟိုခံစစ်မှူးတစ်ယောက်ပါ။ အရပ် (၆) ပေ (၄)လက်မရှိပြီး တိုက်စစ်မှူးတွေ သတိထားရတဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်ပါ။ ၂ဝဝ၈ခုနှစ်မှာ ဘာစီလိုနာအသင်းကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ချန်ပီယံလိဂ် (၃) ကြိမ်၊ ကမ္ဘာ့ကလပ် (၃) ကြိမ်နဲ့ လာလီဂါဖလား (၇) ကြိမ်အပြင် စပိန်အသင်းနဲ့အတူ ကမ္ဘာ့ဖလားနဲ့ ယူရိုဖလားတွေကိုပါ ရရှိထားသူပါ။ ၂ဝ၁၁ခုနှစ်ကတည်းက အဆိုတော် Shakira နဲ့ချစ်သူဖြစ်နေပြီး သားသမီးနှစ်ယောက် ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
(၆) David Villa
နယူးယောက်စီးတီးကလပ်ရဲ့ တိုက်စစ်မှူးကြီး David Villa ကတော့ ဒီစာရင်းမှာ နံပါတ် (၆) ပါ။ (၃၆) နှစ်အရွယ်ရှိပြီး အရပ်အမြင့်က (၅) ပေ (၉) လက်မရှိပါတယ်။ ၂ဝ၁၇ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ စပိန်လက်ရွေးစင်ကနေ အနားယူခဲ့ပေမယ့် မေဂျာလိဂ်မှာ ကျင်လည်နေဆဲပါ။
(၅) Mario Gotze
Mario Gotze ကိုတော့ တခြားလူတွေမသိရင်နေမယ်၊ အာဂျင်တီးနားပရိသတ်တွေက ကောင်းကောင်းကြီးသိမှာပါ။ ၂ဝ၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲမှာ အာဂျင်တီးနားအသင်းကို အနိုင်ဂိုးသွင်းလိုက်တာ ဒီမောင်ပါပဲ။ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့ ဒေါ့မွန်အသင်းတွေမှာ ကျင်လည်ဖူးတဲ့သူဟာ ဆုဖလားပေါင်းများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ ဂျာမဏီမော်ဒယ် Ann-Kathrin Brömmel နဲ့ ၂ဝ၁၂ခုနှစ်ကတည်းက လက်တွဲနေပါတယ်။
(၄) James Rodriguez
ကိုလံဘီယာ ကွင်းလယ်တိုက်စစ်မှူး James Rodriguez ဟာ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကစားသမားဖြစ်ပြီး ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းမှာ အငှားနဲ့ ကစားနေပါတယ်။ (၂၆) နှစ်သာရှိသေးပြီး အရပ်အမြင့် (၅) ပေ (၁၁) လက်မရှိပါတယ်။ လန်းဆန်းတက်ကြွယ်ပြီး နုပျိုနေတဲ့ သူ့ရုပ်သွင်ဟာ ဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်လို ထင်မှားရပါတယ်။
(၃) Ricardo Kaka
Ricardo Kaka ဟာ ကစားသမားဘဝက အနားယူသွားပြီဆိုပေမယ့် ဒီစာရင်းထဲမှာတော့ နံပါတ် (၃) ချိတ်နေတုန်းပါပဲ။ အဆိုတော် Caroline Celico နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပေမယ့် အခုချိန်မှာတော့ လမ်းခွဲထားပါတယ်။ ကလေးနှစ်ယောက်အဖေလို့ မထင်ရလောက်အောင် နုပျိုတဲ့ ရုပ်ရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။
(၂) Marco Reus
ဒေါ့မွန်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး Marco Reus ဟာ အခုချိန်မှာတော့ လူပျိုကြီးပါပဲ။ ၅ပေ၁၁လက်မဆိုတဲ့ အရပ်အမောင်းနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုပြည့်တဲ့ ရုပ်ရည်တွေဟာ ဂျာမန်မလေးတွေအတွက် အသည်းစွဲပါပဲ။ သူနဲ့ ဒိတ်လို့ရပါသေးတယ်။
Cristiano Ronaldo (CR7) လို့ ပြောလိုက်ရင် မျက်မှောက်ခေတ်ဘောလုံးလောကရဲ့ မီးရှုးတန်ဆောင်၊ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းကျော်၊ အောင်မြင်မှုများစွာ သိမ်းပိုက်ထားသူ၊ ကွင်းတွင်းကွင်းပြင် ကြိုးစားတဲ့ ကစားသမားစတဲ့ . . . ဂုဏ်ပုဒ်တွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့သူပါ။
Google ၊ Yahoo နဲ့ Bing တို့လို Search Engine တွေမှာ ရှာဖွေမှုအမြင့်ဆုံးသူ၊ ကြော်ငြာငွေအများဆုံးရရှိသူနဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာ ပရိသတ်အများဆုံးရှိတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေနဲ့ ပြည့်စုံလို့သာ သူ့ကို အကျော်ကြားဆုံးအားကစားသမား (Most Famous Athlete in the World) အဖြစ် ESPN က သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ဂျူဗင်တပ်အသင်းမှာ ကစားနေပြီး သူ့ကြောင့်လည်း လူစိတ်ဝင်စားမှုနည်းနေတဲ့ စီးရီးအေရဲ့ပုံရိပ်တွေဟာ ပြန်မြင့်လာဖွယ်ရှိပါတယ်။ ဒီစာရင်းမှာ David Beckham ကို ထည့်မထားပေမယ့် သူကတော့ ရုပ်ရည်နဲ့ပတ်သက်လာရင် နံပါတ် (၁) ပါပဲ။
ရုပျအခြောဆုံး ဘောလုံးသမား (၁ဝ) ယောကျ
ကမ်ဘာတဈလှားမှာ ဘောလုံးသမားပေါငျး (၂၆၅) သနျးနဲ့ ဒိုငျလူကွီး (၅) သနျးရှိတယျလို့ ကမ်ဘာ့ဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျရဲ့ထုတျပွနျခကျြအရ သိရပွီး ဘောလုံးအားကစားဟာ ကမ်ဘာ့လူဦးရရေဲ့ (၄) ရာခိုငျနှုနျးနဲ့ ပါဝငျပကျသကျနတေယျလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။ နာမညျကြျောဘောလုံးသမားတှေ အမြားကွီးရှိတဲ့အထဲကမှ ရုပျအခြောဆုံး (၁ဝ) ယောကျကို ဖျောပွလိုကျရပါတယျ။
ခြဲလျဆီးကလပျနဲ့ ဘယျလျဂြီယံလကျရှေးစငျအသငျးတို့ရဲ့ ဂိုးသမား Thibaut Courtois က ဒီစာရငျးမှာ နံပါတျ (၁ဝ) မှာ ရပျတညျနပေါတယျ။ (၆) ပေ (၇) လကျမဆိုတဲ့ အရပျကွီးက မွနျမာမိနျးကလေးတှရေဲ့ အမွငျအရ ပွောရရငျ တောငျ့တောငျ့ဖွောငျ့ဖွောငျ့ကွီးပေါ့။ စပိနျနိုငျငံသူ Marta Domínguez နဲ့ ၂ဝ၁၅ခုနှဈမှာ လကျတှဲခဲ့ပွီး ၂ဝ၁၇ခုနှဈ ဧပွီလမှာ လမျးခှဲခဲ့ပါတယျ။ သားသမီး (၂) ယောကျပိုငျဆိုငျထားပွီး လကျရှိအခြိနျမှာတော့ လူလှတျတဈယောကျဖွဈနပေါပွီ။
ရီးရဲလျမကျဒရဈနဲ့ စပိနျကှငျးလယျကစားသမား Isco ကိုတော့ လူတိုငျးသိကွမယျထငျပါတယျ။ (၂၆) နှဈသာ ရှိသေးပမေယျ့ ခနျြပီယံလိဂျဖလား (၄) ကွိမျ၊ ကမ်ဘာ့ကလပျ (၃) ကွိမျနဲ့ လာလီဂါဖလား (၁) ကွိမျအထိ အောငျမွငျမှုရရှိထားပါတယျ။ သူဟာ Victoria Calderón နဲ့ (၅) နှဈကွာ လကျတှဲခဲ့ပွီး သားတဈယောကျရခဲ့ပါတယျ။ ၂ဝ၁၇ခုနှဈမှာတော့ စပိနျမငျးသမီး Sara Sálamo နဲ့ တှဲနကွေောငျး ကွညောခဲ့ပါတယျ။ (၅) ပေ (၉) လကျမသာရှိပမေယျ့ နှုတျခမျးမှေး၊ မုတျဆိတျမှေးတှနေဲ့ ကွညျ့ကောငျးလှနျးလို့ လူခြောစာရငျးဝငျဖွဈသှားတာပါ။
အာဆငျနယျနဲ့ ဘာစီလိုနာကလပျတှမှော ကစားခဲ့တဲ့ Cesc Fàbregas ဟာ ခြဲလျဆီးမှာ ကစားနပေါတယျ။ အရပျ (၅) ပေ (၁၁) လကျမရှိပွီး လူခြောတဈဦးဖွဈပါတယျ။ Daniella Semaan နဲ့ သားသမီး (၃) ယောကျရှိပွီး ၂ဝ၁၈ခုနှဈ မလေမှာ လကျထပျထားပါတယျ။ သူကတော့ အိမျထောငျနဲ့ပါ။ အရပျအမွငျ့ (၅) ပေ (၁၁) လကျမရှိပါတယျ။
Gerard Pique ဟာ ဘာစီလိုနာနဲ့ စပိနျလကျရှေးစငျအသငျးရဲ့ ကစားနတေဲ့ ဗဟိုခံစဈမှူးတဈယောကျပါ။ အရပျ (၆) ပေ (၄)လကျမရှိပွီး တိုကျစဈမှူးတှေ သတိထားရတဲ့ ကစားသမားတဈယောကျပါ။ ၂ဝဝ၈ခုနှဈမှာ ဘာစီလိုနာအသငျးကို ရောကျရှိခဲ့ပွီး ခနျြပီယံလိဂျ (၃) ကွိမျ၊ ကမ်ဘာ့ကလပျ (၃) ကွိမျနဲ့ လာလီဂါဖလား (၇) ကွိမျအပွငျ စပိနျအသငျးနဲ့အတူ ကမ်ဘာ့ဖလားနဲ့ ယူရိုဖလားတှကေိုပါ ရရှိထားသူပါ။ ၂ဝ၁၁ခုနှဈကတညျးက အဆိုတျော Shakira နဲ့ခဈြသူဖွဈနပွေီး သားသမီးနှဈယောကျ ပိုငျဆိုငျထားပါတယျ။
နယူးယောကျစီးတီးကလပျရဲ့ တိုကျစဈမှူးကွီး David Villa ကတော့ ဒီစာရငျးမှာ နံပါတျ (၆) ပါ။ (၃၆) နှဈအရှယျရှိပွီး အရပျအမွငျ့က (၅) ပေ (၉) လကျမရှိပါတယျ။ ၂ဝ၁၇ခုနှဈ သွဂုတျလမှာ စပိနျလကျရှေးစငျကနေ အနားယူခဲ့ပမေယျ့ မဂြောလိဂျမှာ ကငျြလညျနဆေဲပါ။
Mario Gotze ကိုတော့ တခွားလူတှမေသိရငျနမေယျ၊ အာဂငျြတီးနားပရိသတျတှကေ ကောငျးကောငျးကွီးသိမှာပါ။ ၂ဝ၁၄ ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲမှာ အာဂငျြတီးနားအသငျးကို အနိုငျဂိုးသှငျးလိုကျတာ ဒီမောငျပါပဲ။ ဘိုငျယနျမွူးနဈနဲ့ ဒေါ့မှနျအသငျးတှမှော ကငျြလညျဖူးတဲ့သူဟာ ဆုဖလားပေါငျးမြားစှာကို ပိုငျဆိုငျထားသူပါ။ ဂြာမဏီမျောဒယျ Ann-Kathrin Brömmel နဲ့ ၂ဝ၁၂ခုနှဈကတညျးက လကျတှဲနပေါတယျ။
ကိုလံဘီယာ ကှငျးလယျတိုကျစဈမှူး James Rodriguez ဟာ ရီးရဲလျမကျဒရဈကစားသမားဖွဈပွီး ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျးမှာ အငှားနဲ့ ကစားနပေါတယျ။ (၂၆) နှဈသာရှိသေးပွီး အရပျအမွငျ့ (၅) ပေ (၁၁) လကျမရှိပါတယျ။ လနျးဆနျးတကျကွှယျပွီး နုပြိုနတေဲ့ သူ့ရုပျသှငျဟာ ဆယျကြျောသကျတဈယောကျလို ထငျမှားရပါတယျ။
Ricardo Kaka ဟာ ကစားသမားဘဝက အနားယူသှားပွီဆိုပမေယျ့ ဒီစာရငျးထဲမှာတော့ နံပါတျ (၃) ခြိတျနတေုနျးပါပဲ။ အဆိုတျော Caroline Celico နဲ့ လကျထပျခဲ့ပမေယျ့ အခုခြိနျမှာတော့ လမျးခှဲထားပါတယျ။ ကလေးနှဈယောကျအဖလေို့ မထငျရလောကျအောငျ နုပြိုတဲ့ ရုပျရညျကို ပိုငျဆိုငျထားသူပါ။
ဒေါ့မှနျအသငျးရဲ့ တိုကျစဈမှူး Marco Reus ဟာ အခုခြိနျမှာတော့ လူပြိုကွီးပါပဲ။ ၅ပေ၁၁လကျမဆိုတဲ့ အရပျအမောငျးနဲ့ ဆှဲဆောငျမှုပွညျ့တဲ့ ရုပျရညျတှဟော ဂြာမနျမလေးတှအေတှကျ အသညျးစှဲပါပဲ။ သူနဲ့ ဒိတျလို့ရပါသေးတယျ။
Cristiano Ronaldo (CR7) လို့ ပွောလိုကျရငျ မကျြမှောကျခတျေဘောလုံးလောကရဲ့ မီးရှုးတနျဆောငျ၊ နှုတျခမျးနီမလေးတှရေဲ့ အသညျးကြျော၊ အောငျမွငျမှုမြားစှာ သိမျးပိုကျထားသူ၊ ကှငျးတှငျးကှငျးပွငျ ကွိုးစားတဲ့ ကစားသမားစတဲ့ . . . ဂုဏျပုဒျတှနေဲ့ ပွညျ့စုံတဲ့သူပါ။
Google ၊ Yahoo နဲ့ Bing တို့လို Search Engine တှမှော ရှာဖှမှေုအမွငျ့ဆုံးသူ၊ ကွျောငွာငှအေမြားဆုံးရရှိသူနဲ့ လူမှုကှနျရကျမှာ ပရိသတျအမြားဆုံးရှိတဲ့ ဂုဏျပုဒျတှနေဲ့ ပွညျ့စုံလို့သာ သူ့ကို အကြျောကွားဆုံးအားကစားသမား (Most Famous Athlete in the World) အဖွဈ ESPN က သတျမှတျထားပါတယျ။
လကျရှိအခြိနျမှာတော့ ဂြူဗငျတပျအသငျးမှာ ကစားနပွေီး သူ့ကွောငျ့လညျး လူစိတျဝငျစားမှုနညျးနတေဲ့ စီးရီးအရေဲ့ပုံရိပျတှဟော ပွနျမွငျ့လာဖှယျရှိပါတယျ။ ဒီစာရငျးမှာ David Beckham ကို ထညျ့မထားပမေယျ့ သူကတော့ ရုပျရညျနဲ့ပတျသကျလာရငျ နံပါတျ (၁) ပါပဲ။